एनएसएलमा माथिल्लो स्तरको फुटबल हेर्न पाईनेछ - सुदीप शर्मा (अन्तरवार्ता) - Khelpati
एनएसएलमा माथिल्लो स्तरको फुटबल हेर्न पाईनेछ - सुदीप शर्मा (अन्तरवार्ता)
शुक्रवार, फाल्गुन २८, २०७७ हिम बिक्रम केसी
तस्बिर - सुदीप शर्माको फेसबुक
घरेलु फुटबलको संरचनालाई लिएर बेला बेलामा बहस भइरहन्छ । धेरैको आरोप छ, शीर्ष डिभिजनको फुटबलले देशको प्रतिनिधित्व गरेन । काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै सिमित क्लबले फुटबलमा हालिमुहाली गरे । सहिद स्मारक 'ए' र 'बी' डिभिजन लिग खेल्ने अधिकांश क्लब काठमाडौं उपत्यकाभित्रका छन् ।
बहसका बीच घरेलु खेलकुदमा फ्रेन्चाइज फुटबलको प्रयोग हुँदैछ । नेपालको अग्रणी व्यवसायीक घराना चौधरी ग्रुपले नेपाल स्पोर्टस म्यानेजमेन्टमार्फत नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) नामक फ्रेन्चाइज फुटबल लिग सुरु गर्दैछ । छिमेकी देश भारतमा सफल बनेको फुटबलको फ्रेन्चाइज लिग नेपालको खेलकुदमा सफल बन्ला ?
नेपाल सुपर लिगको विविध आयाममा केन्द्रित रहेर नेपाल स्पोर्टस म्यानेजमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइयो) सुदीप शर्मासँग खेलपाटीका सम्पादक हिमबिक्रम केसीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं ।
के हो नेपाल सुपर लिग ?
नेपाल सुपर लिग अहिले फुटबलको फ्रेन्चाइज लिगबाट सुरु गरेका छौ । नेपाल इस्पोट्स म्यानेजमेन्टको लक्ष्य भनेको भविष्यमा सबै खेलको लिगहरु सञ्चालन गर्ने हो । खेलकुदलाई थप व्यवसायिक बनाउने, खेलाडीलाई व्यवसायिक बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझै उपलब्धिहरु बढ्न सकोस भन्ने योगदान गरौं भन्ने उद्देश्यनै हो ।
छिमेकी देश भारतमा फुटबलकै फ्रेन्चाइज (आइएसएल) चल्छ, त्यही प्रयोग नेपाली फुटबलमा गर्न खोजिएको हो ?
हामी नेपालमा गर्दैछौं, त्यसैले नेपाल सुपर लिग भयो । उहाँको भारतमा हुन्छ, इन्डियन सुपर लिग । नाम मिल्दो जुल्दो छ । ब्रान्डिङको हिसाबले एनएसएल सुन्दापनि राम्रो सुनिने हुन्छ । फ्रेन्चाइज लिगको कतिपय अवधारणा लगभग उस्तै हुन्छ ।
अवधारणा उस्तै हुदाँ, फ्रेन्चाइज टिमहरु, ब्यवसायीक कुराहरु, मोडलहरु, म्याच खेल्ने कुराहरु, इभेन्टमा हुने मनोरञ्जनका कुराहरु मिल्दा हुन्छन् । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हुने चिजहरु मिल्दै आउँछन् । यहाँ हामीले अन्तराष्ट्रिय अवधारणालाई लिदै नेपाली माटो सुहाउँदो, नेपालमा हुने, खेलाडीको स्तरोन्नतीका लागि के के गर्न पर्छ, स्थानीय अवस्था अनुसारका सोचहरुलाई कार्यान्वयन गर्दैछौं ।
नेपाली फुटबलको संरचनालाई लिएर बेला बेलामा बहस हुने गर्छ । एनएसएलको आगमनले घरेलु फुटबलमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?
हाम्रो लिगको छुट्टै इतिहास छ । आफ्नै लिगेशी छ । त्यसरीनै चल्दै आएको छ । यो हाम्रो मुख्य लिग हो । एनएसएलको पत्रकार सम्मेलनमा समेत एन्फा अध्यक्षले शीर्ष डिभिजनको लिग सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगनै हुने बताईसक्नुभएको छ । हामी सहर्ष त्यसलाई स्विकार गर्छौ । त्यसलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्छौं ।
एनएसएल जम्मा दुई महिना चलाउने सोच छ । त्यो दुई महिनामा यति धेरै निजी क्षेत्रलाई समाहित गरौं कि भोली त्यसले नेपालको समग्र फुटबलको संरचनामा सहयोग गरोस भन्ने छ । यो लिग पनि संग सँगै चलिरहन्छ, ए डिभिजन लिगले अझ ठुलो आकार लिदै जाला, बढ्दै जानेछ ।
त्यहाँ भएका खेलाडीलाई, क्लबलाई निजी क्षेत्र फुटबलमा आईसकेपछि खेलकुदमा एउटा भविष्य रहेछ भनेर देखाउँछ । भविष्य त छ, नभएको हैन । केही कारणले अलिकती परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको हो ।
एनएसएल दुई महिना खाली भएको विन्डोमा सञ्चालन हुन्छ । खेलाडीहरु अन्य व्यस्त नभएको अवस्थामा राम्रो पैसा, राम्रो माहोल, राम्रो बोनश र उनीहरुमाथि लगानीको वातावरण पनि बनोस भनेर निजी क्षेत्रलाई जोडेर समग्र फुटबलको वातावरणलाई अझ उकास्न एनएसएलले सहयोग पुर्याओस भन्नेछ ।
एनएसएलको आगमनसंगै परम्परागत नेपाली फुटबल धानेर बसेका क्लबले कत्तिको असुरक्षित महशुश गरेको पाउनु भएको छ ?
उहाँहरुलाई लागेको होला, नीजि क्षेत्र आएको छ, कसरी आएको छ भनेर । भारतको विषयले पनि लागेको हुन सक्छ । हामीले उहाँहरुसंग समेत सहकार्य गर्ने हो । हामीले आफ्नो ठाउँबाट सक्ने, एनएसएलले सक्ने ठाउँमा क्लबहरुलाई, खेलाडीलाई सहयोग गरेर, हात मिलाएरै जाने हो । संगै मिलेरै काम गर्ने हो । प्रतिस्पर्धाको रुपमा लिएकै छैनौं । उहाँहरु ए डिभिजन लिग, ईतिहास कोरेको क्लब छ । उहाँहरुको आफ्नै स्थान छ, त्यो विशेष छ । हामीहरु भर्खरै पाईला चाल्दैछौ । त्यहाँ कुनै प्रतिस्पर्धा छ जस्तो लाग्दैन ।
यसले दुई महिनाको विन्डो पाएको छ । त्यो समयमा आफ्नो कार्यक्रम गर्छ । अन्य ५–६ महिनाको लिगमा मुख्य क्लबहरु खेल्छन् । हामीले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने सहकार्य गछौं । अलिकती संवादको ग्याप भएको हो कि भन्ने लाग्छ । म अनुरोध गर्न चाहन्छु, एनएसएल एन्फाको माध्यमबाट यहाँहरुसंग बसेर, भेटेर, कुरा गर्नका लागि ईच्छुक छ । स्पष्टता आवश्यकता भएको खण्डमा त्यो दिन समेत तयार छौं । त्यसमा कुनै समस्या छैन ।
एन्फा छ, हामी छौं, उहाँहरु हुनुहुन्छ । त्यो कुरालाई एन्फालेनै भनेको छ । क्लबहरुलाई चित्त बुझाएरै हामी अघि बढ्ने हो । यसलाई सन्देहको हिसाबले हेर्न पर्ने आवश्यकता छैन । त्यसरी नलिन समेत अनुरोध गर्दछु । हामी सहकार्य गरेरै अघि बढ्ने हो ।
नेपालमा फुटबलका धेरै समर्थकहरु छन् । एनएसएलका के कस्ता विशेषता छन्, जो नेपाली दर्शकले हेर्न पाउँछन् ?
एनएसएल निजी क्षेत्रबाट जुन प्रतियोगिता भईरहेको छ । त्यसमा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका जनशक्ति लिएर आएर व्यवस्थापनको हिसाबले पनि अहिलेसम्मकै परिस्कृत र उत्कृष्ट प्रतियोगिता हुन्छ । यसले एउटा बेन्चमार्क सेट गर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसको तयारी हामी गरिरहेका छौं । संगसंगै नगद पुरस्कारको कुरा, हरेक खेलमा म्यान अफ दी म्याचको कुरा, खेलाडीले पाउने अन्य अवार्डको कुरा विशेष रहनेछ । संगसंगै अन्तराष्ट्रिय खेलाडीहरु कोभिडका कारणले कत्तिको पहिलो सिजनमा सम्भव होला भनेर हेर्दैछौं ।
फ्रेन्चाईज टिमहरु बाहिरका खेलाडी ल्याउन धेरेनै इच्छुक हुनुहुन्छ । त्यसको सम्भावनाको बिषय अहिलेनै भन्न सक्दैनौं । तर एसिया भित्रका राम्रा राम्रा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीहरु आउने र त्यसलाई एन्फाले त्यसको सहजीकरण गर्ने कुरा छ । कतिपय सेलिब्रेटी र मनोरञ्जन क्षेत्रका मान्छेहरु पनि यो फुटबलसंग जोडिनेछन् । फ्रेन्चाईजमा देशका अधिकांश कर्पोरेट क्षेत्रका मान्छेहरु जोडिने र अरु विधाका नाम चलेका मान्छेहरु टिम लिएर आउँदा अझ वृहत बनाउन लागिरहनु भएको छ ।
अझ विशेष फुटबलको माहोल बनाउने लक्ष्यमा छौं । धेरैपछि फ्लोर लाइटमा खेल हुँदैछ । रातिको समयमा प्रकाशमा खेल हुदैछ र त्यो फुटबल हेर्ने प्रशंसकका लागि समेत सबै कुराको मिश्रण एनएसएल हुन्छ भन्ने लागेको छ । त्यही बनाउने बाटोमा लागिरहेका छौं । जति जना रंगशाला आउन सक्नु हुदैन, बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँहरुका लागि पनि राष्ट्रिय स्तर र अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म पनि पहँुच भएको च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रशारणको व्यवस्था मिलाउँदै छौं ।
माथिल्लो स्तरको फुटबल नेपाली दर्शकका लागि पस्किनेनै हाम्रो उद्धेश्य हो । जसमा खेलाडीले समेत फाईदा पाउँछ, संघले समेत प्रत्यक्ष फाईदा लिन सक्छ । फ्रेन्चाईजहरुले समेत फाईदा लिन सक्छन् । त्यो किसिमको मोडालिटी बनाएका छौं । जति फ्रेन्चाईज टिम आउनु भएको छ । उहाँहरुले ग्रासरुटमा समेत लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो शर्त छ ।
भर्खरै पहिलो संस्करण सुरु गर्न गईरहेका छौं । भोली एकेडेमी बनाउने, मैदान बनाउने कुरा आ आफ्नो क्षेत्रमा लगानी गर्दै जानु हुन्छ ।
एनएसएलले नेपाली फुटबलमा स्थापित गर्ने मान्यता के के हुन् ?
एनएसएलले नेपाली फुटबलमा स्थापित गर्ने कुरा भनेको निजी क्षेत्रलाई र फुटबललाई जोड्ने पुलको रुपमा काम गर्छ । जसले गर्दा फुटबलमा भोलि धेरै लगानी भित्रनेछ । त्यो कुराले खेलकुद र खेलाडीलाई पनि फाइदा हुने भएको छ ।
दोस्रो कुरा फुटबल जसरी चलिरहेको छ । त्यसमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका जनशक्ति लिएर आएर प्रतियोगिता आयोजनामा कार्यान्वयन गर्दैछौ । खेल आयोजना, प्रत्यक्ष प्रशारण र इभेन्ट पनि अलि वृहत र उत्कृष्ट हुनेछ ।
समग्रमा यसले छोड्ने छाप भनेको खेल, खेलाडी र सबै सरोकारवाला निकायलाई फुटबललाई थप व्यवसायीक र पुनसंरचना गर्नका लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेल्छ ।
एनएसएलले श्रेणी विहिन तरिकाले घरेलु फुटबलमा पाईला राख्दैछ । धेरेले यसलाई मनोरञ्जन लिगको रुपमा समेत व्याख्या गरेका छन् । भविष्यमै एनएसएलले स्थापित गरेको संरचना घरेलु फुटबलको मुल संरचना बन्ने सम्भावना छ ?
एनएसएल मनोरञ्जनको लागि मात्र हो भनेर म मान्दिन । मनोरञ्जन त भैहाल्छ, तर संगसंगै विकास पनि हुन्छ । अहिले दुई महिनाको विन्डो छ, त्यही हिसाबले अघि बढ्ने हो । अरु कुनै सोच छैन । भर्खरै बामे सर्दैछौं । यसलाई स्थापित गर्ने र विकास गर्ने चुनौती छ ।
एनएसएल आफैमा विकास हुनपर्यो । फ्रेन्चाइज टिमलाई लगानी फिर्ता दिन पर्यो । यसैमा २–४ वर्ष लागिहाल्छ । त्यसैले अहिले हामी आगामी ५ वर्षसम्म एनएसएललाई ब्राण्ड बनाउने र फ्रेन्चाइज लगानी फिर्ता दिने भन्नेमात्र सोचेका छौं । तर अहिले मुख्य संरचना बन्ने, त्यता जाने सोचेका छैनौं ।
किनकी हामीले भन्दै आएका छौं, ए डिभिजन लिगको आफ्नै लिगेसी छ । आफ्नै इतिहास छ । त्यसलाई फिफा, एएफसी र एन्फाबाट सञ्चालित छ । हामीले त्यसलाई चुनौती दिन सक्छौ भन्ने लाग्दैन ।
भलिबलको बजार ब्यापक बनाउनुपर्छ – मानवीर छन्त्याल (अन्तर्वार्ता)
राष्ट्रिय फुटबल टिम आज स्वदेश आईपुग्ने
अलीले पीएसएलको बाँकी खेल गुमाउने
लुकाकु चम्किदा बेल्जियमको सानदार जित